Dejiyaha dhaliyaha naaftada, Dejinta go'an, Genset, Cummins Generator, Saldhigga Awooda-KENTPOWER
KT Perkins Taxanaha Diesel Generator
KT Deutz Taxanaha Naaftada Generator
KT Doosan Taxanaha Naaftada Generator
KT KUBOTA Taxanaha Naaftada Generator
KT Mitsubishi Taxanaha Diesel Generator
KT Yangdong Taxanaha Diesel Generator
KT SDEC Taxanaha Naaftada Generator
KT Generator Nooc Nooc Kale ah
KT MTU Generator Diesel Generator
KT Yanmar Taxanaha Naaftada Generator
KT ISUZU Taxanaha Diesel Generator
KT Ricardo Taxanaha Diesel Generator
KT Yuchai Taxanaha Naaftada Generator
Qaybaha Generator-ka Diesel
Qaybaha Generator Cummins
KT Gaaska dhaliyaha
KT Generator Gas Generator ayaa la dhigay
KT Biogas Generator ayaa la dhigay
WAANU SOO BANDHIGAYNAA QALABKA TAYO SARE
Sharaxaad: KT-cummins Taxanaha Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) waxaa la aasaasay sanadkii 1919 waxayna xarunteedu tahay magaalada Columbus, Indiana, USA. Cummins waxaa loogu magac daray aasaasihiisa, Claire Lyle Cummins, oo ah makaanik otomaatig ah iyo alifbeer makaanik ah. Cummins waxay xarunteedu tahay Columbus, Indiana, USA. Shirkaddu waxay adeegyo u fidisaa macaamiisha iyada oo u sii marineysa wakaaladeeda 550 ee wax qeybiya iyo in ka badan 5,000 oo iibiyeyaal wax ka iibiya in ka badan 160 dal iyo gobollada adduunka oo dhan. Cummins wuxuu leeyahay 34,600 ...
KT-Mitsubishi Taxanaha Diesel Generator
Sharaxaad: Shirkadda Japan ee Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1884. Waana mid ka mid ah 500 ee shirkadood ee adduunka ugu sarreeya isla markaana kaalinta labaad kaga jirta qaybta mashiinnada guud. Warshadaha culus ee Mitsubishi waxay bilaabeen inay soo saaraan oo ay soo saaraan matoorada naaftada ah iyo qalab koronto dhaliyayaal ah sanadkii 1917. Naqshadeynta, soo saarista iyo tijaabinta qeybaheeda ugu waaweyn waxaa si gaar ah u dhameystiray Mitsubishi Heavy Industries. Noocyada koronto dhaliyaha Mitsubishi waxay ku shaqeyn karaan cimri dherer ka hooseeya guryaha durugsan ...
KT-Deutz Taxanaha Diesel Generator
Sharaxaad: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. waxaa sameeyay aasaasaha warshadaha mashiinka adduunka-German Deutz AG iyo warshadaha baabuurta Shiinaha Hogaamiyaha China FAW Group Corporation wuxuu galiyay wadar dhan RMB 1.4 bilyan Saamiga 50% waxaana la aasaasay Ogosto 2007. Waxaa jira 2,000 oo shaqaale ah iyo awoodda wax soo saar sanadle ah oo ah 200,000 oo unug. Shirkaddu waxay leedahay heer caalami oo heer caalami ah. Wax soo saarka hogaaminaya waa C, E ∕ F, DEUTZ seddex meel oo wax soo saar ah, seddex taxane o ...
KT-Perkins Taxanaha Diesel Generator
Sharaxaadda: Perkins Engine Co., Ltd. waa shirkad hoosaad ka ah Caterpillar Corporation waana mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee keena naaftada waddada ka baxsan iyo matoorada gaaska dabiiciga ah. Shirkadda Perkins Engine Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1932, iyadoo sanadkii ay soo saarto wax ku dhow 400,000 oo matoor. Perkins waxay siisaa 4-2000 kW naaftada iyo matoorada gaaska shirkadaha soo saara qalabka korontada sida Chrysler, Ferguson iyo Wilson. In kabadan 800 oo soosaarayaasha hogaaminaya ayaa doorta xalka awooda Perkins ee beeraha, Generati awood ...
KT-Doosan Taxanaha Naaftada Generator
Sharaxaad: Doosan Mobaylka Awooddu waa qayb ka mid ah Koofurta Kuuriya Koofurta Doosan. Bishii Nofeembar 2007, Doosan Group, oo ka mid ah shirkadda Fortune 500 ee adduunka, waxay heshay qayb ka mid ah ganacsiyada Ingersoll Rand. Kadib isdhexgal ganacsi oo taxane ah, Qaybta Awoodda Moobilka Doosan ayaa ugu dambeyn la aasaasay. Doosan Mobile Power waxay siisaa qalabka awooda mobilada kaabayaasha aduunka, macdanta, dhisida maraakiibta, horumarinta tamarta iyo warshadaha kale ee dhismaha injineernimada, oo ay ku jiraan cimilada wareega ...
Sharaxaad: Mashiinka taxanaha ah ee loo yaqaan 'Ricardo Generator Diesel Generator' oo leh qiimo wanaagsan oo waxsoosaar Badeecadeed: Ricardo Genset, Kofo Genset, Ricardo Diesel Generator, Kofo Diesel Generator, Ricardo Kofo Power Station Generator, Genset, Generator set, Power Station, Generating set, Kentpower, Cummins Diesel Generator, Qaybaha Generator, Qaybaha Geneset, Generator Generator, Qeexida Diesel Genera Aamusnaanta:
KT-Yanmar Taxanaha Diesel Generator
Sharaxaad: Yanmar waa soo saare matoor naafto ah oo Jabbaan ah oo taariikhdiisu tahay in ka badan 100 sano. Shirkaddu waxay soo saartaa makiinado loogu talagalay codsiyo kala duwan: giraangiraha badda, qalabka dhismaha, qalabka beeraha iyo noocyada matoorrada. Shirkaddu waxay xarunteedu tahay Chaya, North North, Osaka, Japan. YANMAR Co., Ltd. ee Japan waxay ku hogaamisay aduunka badeecadaha bey'ada u fiican oo leh wasakhda wasakhda oo hooseysa, buuqa yar iyo gariirka yar. Hadafka Yanmar waa inuu sameeyo en ...
Sharaxaad: Waxa la aasaasay 1951, Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Kooxda Yuchai oo kooban) waxay xarunteedu tahay Yulin, Guangxi Zhuang Autonomous Region. Waa shirkad maalgashi iyo maareynta maalgelinta, oo udub dhexaad u ah howlaha raasumaalka iyo maaraynta hantida. Maaddaama ay tahay shirkad ballaaran oo ganacsi oo ay dowladdu leedahay, waxay leedahay in ka badan 30 gebi ahaanba leh, heysata, ama wada-hawlgalayaal saamilay ah, iyadoo wadarta hantida ay tahay 40.5 bilyan yuan iyo ku dhowaad 20,000 oo shaqaale ah. Kooxda Yuchai waa gubasho gudaha ah ...
FUJIAN KENT Farsamada iyo korontada CO., LTD (KENTPOWER marka la soo gaabiyo), oo la aasaasay sanadkii 2005 iyadoo la diiwaan galiyay raasamaal dhan $ 15 milyan, naqshadeynta iyo soo saarida qalabka koronto dhaliyaha, noocyada dhaliyaha gaaska dabiiciga ah, nidaamka tamarta qorraxda, isku dhafka isu geynta, iibka iyo dayactirka adeeg. Shirkadda ku taal magaalada Fuzhou, gobolka Fujian, oo leh aag 100000 mitir murabac ah, in ka badan shaqaalaha 100. Wax soo saarkiisa waxaa badanaa loo isticmaalaa awood ahaan keyd ama awood deg deg ah dhinacyo badan oo muhiim ah, oo ay ku jiraan jidadka waaweyn, jidadka tareenka, guryaha waaweyn, hoteelada, miinooyinka, iskuulada, isbitaalada, hudheelada, warshadaha iyo isgaarsiinta iyo nidaamka maaliyadeed, iwm.
Wararka shirkadda iyo wararka warshadaha
AGAASIMAHA DIYEL OO LOOGU SAMEEYAY DHISMAHA XOOLAHA XOOLAHA
Warshadaha khudaarta ayaa ka soo koray miisaanka soo jireenka ah ilaa ay u baahdeen hawlgallada mishiinka. Qadarinta quudinta, qalabka taranka, iyo hawo-qaadashada iyo qalabka qaboojinta dhammaantood waa qalabaysan, taas oo go'aamisa in d ...
ISBITAALKA MAGAALADA DIIDEL DIINTA SET
Qalabka korontada ee keydinta isbitaalka iyo keydka bangiga ayaa leh shuruudo isku mid ah. Labaduba waxay leeyihiin astaamaha tamarta joogtada ah iyo jawiga deggan. Waxay leeyihiin shuruudo adag oo ku saabsan xasiloonida waxqabadka ...
AGAASIMAHA GUUD EE DIYEL OO LAGU SOO SAARAY Warshad isgaarsiineed
KENTPOWER wuxuu ka dhigayaa isgaarsiinta mid amaan ah. Qalabka koronto-dhaliyaha naaftada ayaa inta badan loo isticmaalaa isticmaalka korontada ee xarumaha isgaarsiinta. Saldhigyada heer gobol waa ku dhowaad 800KW, saldhigyada heer degmaduna waa 300-400KW. Guud ahaan, isticmaalka ...
GENERATOR DIYEL DIYAAR AH SET
Shuruudaha waxqabadka ee matoor naaftada ah ee dhismaha garoonka waa inay yeeshaan awood ka hortagga daxalka ah oo aad sare loo qaaday, waxaana dibedda loogu isticmaali karaa dhammaan cimilada. Isticmaaluhu si fudud ayuu u dhaqaaqi karaa, wuxuu leeyahay waxqabad deggan iyo hawlgal fudud. KENTPOWER waa wax soo saar gaar ah oo loogu talagalay goobta: 1. ...
CIIDANKA DIINTA EE DIYEL SET
Qalabka koronto-dhaliyaha ee la dejiyey waa qalab muhiim ah oo keena qalabka korontada marka loo eego xaaladaha garoonka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo amni, kalsooni iyo waxtar wax ku ool ah oo ku saabsan qalabka hubka, taliska dagaalka iyo taageerada qalabka, si loo hubiyo wax ku oolnimada dagaalka hubka hubka iyo qulqulka ...
Xafiiska ku dar: No.12, Jinzhou North Road, Fuzhou, Shiinaha
Warshad ku dar: Tieling Industrial Zone, Fuzhou, Shiinaha
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.